आवश्यक डिजाइन वृत्तचित्र | क्रिएटिव अनलाइन
राचेल अशे उनको सम्मेलनमा Hand हातले बनाउने »
को डिजाईनको बारेमा वृत्तचित्र तिनीहरू नयाँ अवधारणाहरू सिक्नको लागि एक उत्तम तरीका हो, कुनै विषयमा अन्य दृष्टिकोणहरू हेर्न, वा अन्य प्रसिद्ध पेशेवरहरूको इनपुटमा प्रतिबिम्बित गर्न। तिनीहरू उच्च शैक्षिक छन्, र एक राम्रो विकल्प ती बरसात दिउँसो हेर्न जुन तपाईं चाहानुहुन्छ मात्र योजना भनेको "कम्बल र सोफा" भनेर चिनिन्छ।
यहाँबाट म तपाईंलाई रोक्न प्रोत्साहित गर्दछु, र त्यो अध्याय हेर्नुको सट्टा तपाईं आफ्नो मनपर्ने श्रृंखला (वा क्षणको चलचित्र) को पेन्डि have गर्दै हुनुहुन्छ, को लागी प्वाल बनाउनुहोस्। रोचक वृत्तचित्र डिजाइनको बारेमा जुन मैले तपाईं सबैको लागि कम्पाइल गरेको छु। यदि तपाईं यो जस्तै अर्को पोष्ट चाहनुहुन्छ भने, अधिक धेरै वृत्तचित्र र कुराकानीहरूको साथ, टिप्पणीहरूमा यसको लागि सोध्न न हिचकिचाउनुहोस्।
वृत्तचित्र डिजाइन (र कुराकानी)
हेलवेटिका: यो वृत्तचित्र हो, उत्कृष्ट उत्कृष्टता। कुनै पनि डिजाइनरले देख्नु पर्दछ, किनकि यो एक स्वतन्त्र फिल्मको बारेमा छ टाइपोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन y दृश्य सांस्कृतिक। प्रख्यात डिजाइनरहरूद्वारा वृत्तचित्रमा धेरै रोचक योगदानहरू। के भनिएको छ: यो हेर्न आवश्यक छ।
अस्वीकृत: को बारे मा एक वृत्तचित्र औद्योगिक डिजाइन। यसले वस्तुहरू र डिजाइनरको रचनात्मक प्रक्रियाको परीक्षण गर्दछ: टूथब्रशबाट सबै भन्दा परिष्कृत ग्याजेटहरूमा।
बार्सिलोनाका यी विदेशी केटाहरू: दुई बर्ष पहिले अन्तिम डिग्री परियोजना को रूप मा बनाईएको, यो वृत्तचित्र को वर्तमान स्थिति संग सम्बन्धित छ बार्सिलोना मा डिजाइन। यसमा, धेरै डिजाइन पेशेवरहरूले हामीलाई यस शहरको क्षेत्रको विकास र उनीहरूले भविष्यमा के हुने आशा गर्छन् भन्ने बारे रायहरू दिन्छन्।
Stefan Sagmeister: स्टेफन साग्मेस्टर र जेसिका वाल्श यस कागजातमा उनीहरूको काम र उनीहरूको बारेमा कुरा गर्छन् सिर्जना प्रक्रिया। यद्यपि यो अ in्ग्रेजीमा छ, यसलाई हेर्न प्रयास गर्नु लायकको छ।
हातले बनाउने: राहेल एशेले चीजहरू गर्ने महत्त्वको बारेमा कुरा गर्छिन् तपाईंको आफ्नै हात र कागज। हालका वर्षहरुमा उनको काम कागज संग एक सामग्री को रूप मा मूर्तिकला को निर्माण मा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। अ in्ग्रेजीमा पनि।
ग्राफिक डिजाइन के हो?: अर्जेन्टिना वृत्तचित्र जिसमें प्राध्यापक, पेशेवर र विशेषज्ञहरू तिनीहरू "ग्राफिक डिजाइन" परिभाषित गर्न कोसिस गर्छन्। चाखलाग्दो प्रश्नहरू खडा हुन्छन् र यो एक वृत्तचित्र हो जुन हामीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
आभासी क्रान्ति "नि: शुल्क को मूल्य": चाखलाग्दो वृत्तचित्र जुन हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँछ इन्टरनेट मा नि: शुल्क। के यो नि: शुल्क हो? के त्यहाँ प्रयोगकर्तालाई कुनै लागत छैन? सायद आर्थिक होइन, तर बौद्धिक हो: यसको बदलामा वेबले हाम्रो इच्छा, विचारहरू ... प्राप्त गर्दछ।
प्रभावकारीहरू: छोटो दस्तावेजी यसले एक प्रभावशाली व्यक्ति हुनुको अर्थ के हो भनेर अनुसन्धान गर्दछ र कसरी रचनात्मकता को प्रवृत्ति, फेशन वा संगीत, तिनीहरू संक्रामक हुन्छन्।
कुनै लोगो छैन: नाओमी क्लेन वृत्तचित्र, उही नामको सर्वश्रेष्ठ विक्रेतामा आधारित, यससँग डिलि। गर्दा ब्रान्ड प्रभाव संस्कृति र समाजमा।
निषिद्ध शिक्षा: दस्तावेजी फिल्म जुन प्रस्तावहरू र अभ्यासहरू पुनःप्राप्ति गर्न प्रस्ताव गर्दछ जुन ए बाट शिक्षा सम्बोधन गर्दछ फरक परिप्रेक्ष्य, ती अनुभवहरू देखाउनुहोस् जुन परम्परागत विद्यालयको शैक्षिक मोडेलको संरचनाहरू परिवर्तन गर्न हिम्मत गर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » तपाईंले देख्नु पर्ने वृत्तचित्रहरू डिजाइन गर्नुहोस्
अरमान्डो फिल्महरू भन्यो
तपाईंको टिप्पणीहरू धेरै चाखलाग्दो छन्। यसैले तपाईं अर्को बढ्न जारी राख्न र विशेष गरी मेरो व्यक्तिलाई अनुमति दिनुहोस्। धन्यबाद। आह, मलाई पठाउन जारी राख्नुहोस् वा पढ्न र जारी राख्नको लागि अधिक कागजातहरू वा पीडीएफ कागजातहरू राख्दै, यसैले मेरो ज्ञानलाई सुधार ...
अरमान्डो फिल्महरूमा जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको टिप्पणी अरमान्डो को लागी धन्यवाद। म त्यसपछि वार्तालापहरू र डिजाईनरहरूलाई चासोको सम्मेलनहरूको अर्को सूची तान्न अगाडि बढ्नेछु :)
Free डाउनलोड गर्न फन्ट फन्ट